News | husband
News | Tag: husband
काठमाडौँ । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले ४०० गर्भवतीलाई पोषण उपहार प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भजाँच गराइरहेका गर्भवतीलाई पोषणस्वरुप खानेकुरा र नगद प्रदान गरेको हो ।
यी राशि रहेका पति कहिल्यै असल श्रीमान बन्न सक्दैनन् !
यस्ता छन् दक्षिण भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेत्रीहरुका ह्याण्डसम श्रीमानहरु
एजेन्सी । पछिल्लो समय दक्षिण भारतीय फिल्मको चर्चा विश्वभर रहेको छ ।
श्रीमती रिसाइन् भने कसरी फकाउने ?
भनाइ नै छ बिनाश काले विपरित बुद्धि...रिसाएको बेलामा केही यस्तै अवस्था हुन्छ । मानिस रिसाएको बेला के सही के गलत सोच्दैन । उ खाली आफ्नो रिस देखाउनमात्र तत्पर रहन्छ । यस अवस्थामा भएका घटनाले पछिसम्म नराम्रो परिणाम दिने गर्छ । अझ यसको असर वैवाहिक जीवनमा धेरै नै हुन्छ ।
एजेन्सी । संसारमा अजबगजबका चलनहरु रहेका छन् । एउटा यस्तै अचम्म लाग्दो चलन अफ्रिकामा रहेको छ ।
एजेन्सी । श्रीमान श्रीमतीको झगडा परालको आगो भन्ने उखान त हामी सबैले सुनैकै कुरा हो । हुन पनि हो श्रीमान श्रीमतीको स–सानो कुरामा झगडा पर्छ र एकै छिन पछि मिलिहाल्छन् पनि । झगडापछि हदै भए उनीहरु केही दिनसम्म बोल्दैनन् । साह्रै भै धेरै नै ठूलो झगडा भयो भने उनीहरु अलग हुन्छन् । तर, जापानको मानिस भने श्रीमतीसँग २० वर्ष सम्म सँगै बसेर पनि कहिल्यै दोहोरो कुराकानी गरेनन् ।
यी तीन राशिका पुरुष हुन्छन् सबैभन्दा उत्कृष्ट पति
एजेन्सी । आफ्नो लागि राम्रो जीवनसाथी छान्नु सायद संसारमै सबैभन्दा कठिन काम होला । तर, यहाँ महिलाका लागि भने राशिले जीवनसाथी छान्न केही सहज बनाएको छ । ज्योतिष शास्त्रअनुसार यी तीन राशि बताउँदै छौ, जुन राशिका पुरुष ‘बेस्ट हजबेन्ड’ अर्थात् राम्रो, असल श्रीमान भनिन्छन् ।
यस्ता कुराहरु पत्नीले श्रीमानको अगाडि भुलेर पनि गर्नु हुँदैन
एजेन्सी । पति पत्नीको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन दुवै जनाको उत्तिकै महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा श्रीमतीको आफ्नो निर्णयका कारण पतिहरु उनीहरुदेखि परपर हुन चाहन्छन् ।
अजबगजबका श्रीमान !
एजेन्सी–तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला एक श्रीमानका तीन श्रीमतीहरु एउटै घरमा मिलेर बस्छन् । न्युजर्सीमा रहेका एक व्यक्तिको घरमा तीनजना श्रीमती श्रीमानसँग मिलेर बस्छन् ।
बिरामी श्रीमती कुर्न बसेका श्रीमानले घाँटी थिचेर मारेको आरोप
पाेखरा । घरायसी झगडाका कारण गत पुस १२ गते पोखरा १४ चाउथेकी शुशीला कार्की पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा भर्ना भईन् । उनलाई उनकै श्रीमान्